Beesha Caalamka ayaa sheegtay in aysan taageeri doonin haddii shirka laga soo saaro heshiis… – Hagaag.com
Beesha Caalamka ayaa sheegtay in aysan taageeri doonin haddii shirka laga soo saaro heshiis…
Posted on 4 Febraayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Beesha Caalamka ayaa markale soo dhaweysay shirka Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ee maalintii 2aad uga socda Magaalada Dhuusamareeb.
Beesha Caalamka ayaa dhinacyada ugu baaqday in si hufan uga qaybqaataan, si loo gaaro heshiis suurtagelin kara hannaanka doorashooyinka ee dalka, iyadoo markaasi lagu saleynayo heshiiskii 17-kii bishii September ku wada gaareen Magaalada Muqdisho.
“Waxaa muhiim ah in dhammaan ka qaybgalayaashu ay si wax ku ool ah uga qaybqaataan si loogu heshiiyo hirgelinta hanaanka doorashooyinka qaran heshiiskaasoo dhowraya qaabka doorasho ee heshiiskii 17-kii September.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Beesha Caalamka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay inaanay Beesha Caalamka taageeri doonin, haddii shirka Dhuusamareeb laga soo saaro heshiis kasta oo liddi ku ah midkii 17-kii September.
“Waxaan hoosta ka xariiqeynaa in natiijooyin kasta oo bedel ka ah kii lagu heshiiyay, oo ay ka midyihiin geeddi-socod kale oo kan barbar socda ama doorashooyin qayb ah oo aan loo dhammayn, ama tallaabooyin kale oo aan ahayn hanaanka doorashooyinka lagu heshiiyey, ay noqon doonaan dib-u-dhac aan heli doonin taageerada saaxiibada caalamka. Sidaa darteed, waxaan ugu baaqeynaa dhammaan madaxda siyaasadda inay mudnaanta siiyaan sidii lagu heli lahaan hab horay loogu socdo iyadoo jirin dib u dhac dheeraad ah.” Ayaa lagu sheegay qoraalka.
Saaxiibada caalamka ee Somalia ayaa Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ugu baaqay inay gaaraan heshiis wadar ogol yahay.